Waa maxay cudurka Othello Syndrome | Bezzia
Waa maxay cudurka 'Othello Syndrome'?
Maria Jose Roldan | 29/04/2021 23:31 | Cilmi-nafsiga
Cudurka 'Othello Syndrome' waxaa loola jeedaa dabeecad riwaayad uu qoray qoraa Ingiriis ah oo lagu magacaabo Shakespeare. Dabeecadani waxay ku sifoobi jirtey masayr xanuun, taas oo u keentey inuu ka fikiro marwalba gaalnimada xaaskiisa. Sida la filan karo, qofka u ku dhaca cilladan cilladan cilladan cilladan ahi waxay u keentaa xidhiidhkooda inuu ku dhammaado guul-darrooyin iyo wada-noolaanshaha labada qof inuu noqdo mid aan la sii wadi karin.
Tani waa dhibaato dhab ah lamaane kasta maadaama xiriirku sun noqdo. Maqaalka soo socda waxaan ka hadli doonnaa wax badan oo ku saabsan cilladda noocan ah iyo sida ay ugu saameyso lamaanaha qaab xun.
1 Waa maxay cudurka loo yaqaan 'Othello syndrome'
2 Calaamadaha cudurka 'Othello syndrome'
Waa maxay cudurka loo yaqaan 'Othello syndrome'
Way cadahay in qofka uu ku dhacayo xanuunka 'Othello syndrome' uu leeyahay u nuglaansho gaar ah heer maskaxeed. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira sababo ama sababo taxane ah oo aad ugu timaaddo noocyada masayrka noocan oo kale ah: kalsooni darro, ku tiirsanaanta shucuurta weyn ee lamaanaha iyo cabsi aad u badan oo ah inuu ka tago qofka aad jeceshahay oo keligaa laga tago.
Qofka xaasidnimada noocaas ah leh ayaa sidoo kale la kulmi kara cilado taxane ah oo noocyo kala duwan ah maadaama ay noqon karto xaalad qas ku ah qasab qasab ah ama nooc gaar ah oo nooca loo yaqaan 'paranoid-type disorder'. Dhinaca kale, waxaa sidoo kale loo maleynayaa in la yiri maseerka waxaa sababi kara cunista xad dhaafka ah ee maaddooyinka waxyeellada iyo waxyeelada u leh jirka sida khamriga ama daroogada
Calaamadaha cudurka 'Othello syndrome'
Sidaan kor ku soo sheegnayba, qofka uu ku dhaco cilladani waa hinaaso xanuun iyo caafimaad daro ku ah lamaanihiisa. Masayrka noocan ahi wuxuu yeelan doonaa saddex astaamood oo kala duwan:
Ma jiro sabab dhab ah maxaa hinaasaha noocaas ah loo soo saarayaa.
Shakiga xad dhaafka ah iyo shakiga badan ee lamaanaha.
Dareen-celinta ayaa gebi ahaanba caqli-gal ah oo aan macno lahayn.
Sida astaamaha qofka hinaasaha leh, waxyaabaha soo socda waa in la iftiimiyaa:
Waxay si xad dhaaf ah u xakameysaa lamaanahaaga. Wuxuu u maleynayaa inuu aamin yahay markasta tanina waxay ku kaliftaa inuu si joogto ah u feejignaado.
Ma ixtiraameysaa asturnaanta iyo booska lamaanahaaga. Waa inaad ogaataa waqti kasta waxa lamaanahaagu sameynayo. Tani waxay saameyn xun ku leedahay xiriirkooda bulsheed.
Aflagaadada iyo qeylada ayaa maalin cad ifaya. Waxaas oo dhami waxay horseedayaan rabshad noqon karta mid jireed ama mid maskaxeed.
Ma jirto meel loogu talo galay shucuurta ama dareenka togan. Waa wax iska caadi ah in qofka maseyrsan uu xanaaqo oo caroodo maalinta oo dhan. Kuma faraxsana lammaanihiisa, inuu yahay xiriir ku tiirsan.
Gaaban, waxaa muhiim ah in sida ugu dhaqsiyaha badan loo daaweeyo cilladda noocan ah. Qofka maseyrsan wuxuu u baahan yahay caawinaad xirfadle, si looga caawiyo inuu arko inaadan xiriir la yeelan karin qof kale si sun ah. Haddii uusan qofku ogolaan in la daaweeyo ama uusan awoodin inuu ka gudbo dhibaatada masayrka, cilaaqaadka ayaa halaagsamay. Xiriirku waa inuu ahaadaa mid ku saleysan ixtiraam buuxda iyo kalsoonida labada qof. Masayrka cudurada lama ogolaan karo xiriir, maxaa yeelay wuxuu ku dambayn doonaa inuu burburiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Cilmi-nafsiga » Waa maxay cudurka 'Othello Syndrome'?
Ma ku xanuunaysaa cudurka loo yaqaan 'blancorexia'? Waali ahaanshaha ilkaha cadcad
6 waji daboolan timaha guga